लूका १८ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१८ सधैं प्रार्थना गर्नुपर्छ र कहिल्यै हरेस खानु हुँदैन भनेर बुझाउन उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त बताउन थाल्नुभयो: २ “एउटा सहरमा एक जना न्यायाधीश थियो, जसलाई परमेश्वरको कुनै डर थिएन र ऊ मानिसको आदर पनि गर्दैनथ्यो। ३ त्यही सहरमा एक जना विधवा पनि थिई र ऊ त्यस न्यायाधीशकहाँ घरीघरी गएर यसो भन्थी: ‘मलाई मुद्दा हाल्ने व्यक्तिबाट बचाएर मेरो न्याय गरिदिनुहोस्।’ ४ निकै समयसम्म त उसले वास्तै गरेन तर पछि उसले मनमनै यसो भन्यो: ‘हुन त, म परमेश्वरको कुनै डर राख्दिनँ र मानिसको आदर पनि गर्दिनँ, ५ तैपनि यस विधवाले मलाई घरीघरी दुःख दिइरहेकीले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, नत्रता मकहाँ धाएको धायै गरेर त्यसले मलाई बसीखान दिनेछैन।’ ” ६ त्यसपछि प्रभुले भन्नुभयो: “बेइमान भईकन पनि त्यो न्यायाधीशले के भन्यो, सुन्यौ? ७ त्यसोभए, के परमेश्वरले उहाँलाई दिनरात पुकार्ने आफ्ना चुनिएका जनहरूको न्याय गरिदिनुहुन्न र? उहाँ धीरजी हुनुभएकोले ढिला गरेजस्तो देखिए तापनि उहाँले अवश्य न्याय गरिदिनुहुनेछ। ८ म तिमीहरूलाई भन्छु, उहाँले तिनीहरूको न्याय तुरुन्तै गरिदिनुहुनेछ। तैपनि, मानिसको छोरा आउँदा के उसले साँच्चै यस्तो विश्वास हुने मानिस पृथ्वीमा पाउनेछ?” ९ अनि आफूलाई धर्मी ठान्ने तर बाँकी सबैलाई चाहिं केही मोलको नगन्ने कोही-कोही मानिसहरूलाई उहाँले यो दृष्टान्त पनि बताउनुभयो: १० “दुई जना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा उक्ले, एक जना फरिसी र अर्कोचाहिं कर उठाउने मानिस।* ११ फरिसीले उभिएर मनमनै यसरी प्रार्थना गर्न थाल्यो: ‘हे परमेश्वर, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने म अरू मानिसहरूजस्तो लुटाहा, बेइमान अनि चरित्रहीन छैन र यो कर उठाउने मानिसजस्तो पनि छैन। १२ म हप्ताको दुई चोटि उपवास बसछु अनि आफ्नो सबै आम्दानीको दशांश दिन्छु।’ १३ तर कर उठाउने मानिस भने टाढै उभियो र उसले आफ्नो नजरसमेत स्वर्गतिर उचाल्ने आँट गरेन। अनि छाती पिटीपिटी उसले यसो भन्यो: ‘हे परमेश्वर, म पापीमाथि कृपा गर्नुहोस्।’ १४ म तिमीहरूलाई भन्छु, त्यो मानिसभन्दा यो मानिस परमेश्वरको नजरमा अझ असल ठहरियो र आफ्नो घर गयो। किनकि जसले आफूलाई उचाल्छ, ऊ खसालिनेछ अनि जसले आफूलाई होच्याउँछ, ऊ उचालिनेछ।” १५ तब उहाँले छोइदिऊन्‌ भनेर मानिसहरूले आफ्ना शिशुहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाले तर यो देखेर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हप्काउन लागे। १६ तथापि, येशूले ती शिशुहरूलाई आफूकहाँ बोलाउँदै भन्नुभयो: “साना केटाकेटीहरूलाई मकहाँ आउन देओ, तिनीहरूलाई रोक्न नखोज, किनकि स्वर्गको राज्य यिनीहरूजस्ताकै हो। १७ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, जसले एउटा सानो बालकले जस्तै गरी परमेश्वरको राज्यलाई स्वीकार्दैन, ऊ कुनै पनि हालतमा त्यहाँ छिर्नेछैन।” १८ अनि सभाघरको एक जना मुख्य व्यक्तिले उहाँलाई यस्तो प्रश्न सोध्यो: “हे असल गुरु, के गरें भनेदेखि मैले अनन्त जीवन पाउन सक्छु?” १९ येशूले उसलाई भन्नुभयो: “तिमी किन मलाई असल भन्छौ? असल त परमेश्वरबाहेक अरू कोही छैन। २० तिमीलाई यी आज्ञाहरू त थाहै होला नि, कि ‘आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध नराख्नू, हत्या नगर्नू, नचोर्नू, झूटो साक्षी नदिनू, आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू।’ ” २१ तब उसले भन्यो: “यी सब त मैले सानैदेखि पालन गर्दै आएको छु।” २२ यो सुनेपछि येशूले उसलाई भन्नुभयो: “तिमीमा अझै एउटा कुराको कमी छ: आफूसित भएका सबै चीजबीज बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ। तब तिमीले स्वर्गमा धनसम्पत्ति पाउनेछौ अनि आएर मेरो पछि लाग।” २३ यो सुनेर ऊ अत्यन्तै दुःखी भयो, किनकि ऊ असाध्यै धनी थियो। २४ येशूले उसलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो: “पैसावालहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र छिर्न साँच्चै कठिन कुरा हुनेछ! २५ वास्तवमा, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नभन्दा त उँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न नै सजिलो हुन्छ।” २६ यो कुरा सुन्नेहरूले भने: “त्यसोभए के कसैले उद्धार पाउन सक्ला त?” २७ उहाँले भन्नुभयो: “मानिसहरूका लागि असम्भव कुरा परमेश्वरको लागि सम्भव छ।” २८ तब पत्रुसले भने: “हेर्नुहोस्! हामी आफ्नो सबै कुरा छोडेर तपाईंको पछि लागेका छौं।” २९ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, परमेश्वरको राज्यको खातिर जसले घर वा पत्नी वा दाजुभाइ वा आमाबाबु वा छोराछोरी छोड्छ, ३० उसले अहिल्यै यी कुराहरू धेरै गुणा पाउनुका साथै आउने युगमा अनन्त जीवन पाउनेछ।” ३१ तब बाह्र जना चेलालाई अलग्गै लगेर उहाँले भन्नुभयो: “हेर, हामी यरूशलेमतर्फ उक्लँदैछौं। अनि मानिसको छोराको विषयमा भविष्यवक्ताहरूले लेखेका सबै कुरा पूरा हुनेछन्‌। ३२ जस्तै, ऊ अन्यजातिका मानिसहरूको हातमा सुम्पिइनेछ र तिनीहरूले उसको गिल्ला गर्नेछन्‌, बेइज्जत गर्नेछन्‌, उसलाई थुक्नेछन्‌ ३३ अनि कोर्रा लगाएपछि तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन्‌ तर तेस्रो दिनमा ऊ ब्यूँतनेछ।” ३४ तर तिनीहरूले यीमध्ये कुनै कुराको अर्थ बुझेनन्‌। यो वाणी तिनीहरूबाट छिपाइएको थियो र जे भनियो, त्यो तिनीहरूले बुझेनन्‌। ३५ उहाँ यरिहोनजिकै पुग्नुहुँदा एक जना अन्धो मानिस बाटोको छेउमा बसेर भीख मागिरहेको थियो। ३६ त्यही बाटो भएर गइरहेको भीडको आवाज सुनेपछि उसले के हुँदैछ भनी सोध्यो। ३७ मानिसहरूले उसलाई भने: “नासरी येशू यो बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ!” ३८ यो सुनेपछि उसले यसो भन्दै पुकार्न थाल्यो: “हे दाऊदका छोरा येशू, ममाथि कृपा गर्नुहोस्!” ३९ अघि-अघि गइरहेकाहरूले उसलाई चूप लाग् भनी हप्काउन थाले तर ऊ यसो भन्दै झन्‌ चिच्याइरह्यो: “हे दाऊदका छोरा, ममाथि कृपा गर्नुहोस्!” ४० तब येशू टक्क अडिनुभयो र त्यस माग्नेलाई आफूकहाँ ल्याउन मानिसहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। नजिकै आइपुगेपछि येशूले उसलाई सोध्नुभयो: ४१ “मैले तिम्रो लागि के गरिदिएको तिमी चाहन्छौ?” उसले भन्यो: “प्रभु, मैले फेरि दृष्टि पाऊँ।” ४२ त्यसैले येशूले उसलाई भन्नुभयो: “तिम्रो दृष्टि फर्कोस्; तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ।” ४३ अनि उत्तिखेरै उसले फेरि देख्यो र परमेश्वरको महिमा गर्दै येशूको पछि-पछि लाग्न थाल्यो। यो देखेर सबै मानिसहरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरे।
^ लूका १८:१० * त्यतिखेरका मानिसहरू कर उठाउनेहरूको इज्जत गर्दैनथे।